Wholesale PICC Mugadziri uye Mutengesi | LINGZE
Iyo CATHTONG ™ II PICC Catheter inoitirwa kupfupisa kana kwenguva refu-yekuwana mukana wepakati venous system yeiyo infusion, intravenous therapy, sampling yeropa, jekiseni remagetsi yemusiyano midhiya, manejimendi emvura, mishonga uye zvinovaka muviri, uye inobvumira yepakati venous kumanikidza kuongorora. Iyo CATHTONG ™ II PICC Catheter inoratidzirwa yekugara nguva ipfupi kana kupfuura mazuva makumi matatu.
Iyo CATHTONG ™ II Catheter yakagadzirirwa ne Power Power jekiseni kugona. Power Injection inobvumira jekiseni rekusiyanisa midhiya pachiyero che5.0 mL / sec. Iyi ficha inobvumira iyo PICC mutsara kuti ishandiswe yeKusiyanisa-Enhanced CT (CECT) Kufananidzira.
Iyo mbiri lumen dhizaini inobvumira kushandiswa kwemhando mbiri dzokurapa panguva imwe chete pasina kuisa akawanda macatheters. Pamusoro pezvo, CATHTONG ™ II inoratidzira akasiyana lumen dhayamita kuti ape huwandu hwakawanda hwekuyerera kwemitengo.
Kuzivikanwa kuri nyore
Bvisa zvinyorwa pamabhaudhi uye nekuwedzera chubhu zvinobvumidza nyore kuzivikanwa kwehuwandu hwekuyerera mwero uye simba rejekiseni remagetsi
Kumaka yega yega 1 cm pamwe chete nekateti muviri
Dual lumen dhizaini inobvumira chishandiso chimwe chete kuti chiishandiswe pakurapa kwakawanda
Masendimita makumi mashanu nemashanu masendimita emuviri anokwanisa kudimburwa kusvika pakuda urefu
Simba uye mukurumari
Catheter muviri wakagadzirwa uchishandisa polyurethane
Giravhiti Kuyerera Rate
Max Kuyerera Rate
Lumen Gauge Saizi
Kuroora kana kuroorwa
15.5 ml / min
5.0 mL / chik
PICC KIT INOSANGANISIRA
• Kuunza Tsono
• Micro-Kuwana neDilatator
Kana iwe ukashandisa PICC, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kuti usafambisa maoko ako zvakanyanya kana kunyanya kusimba panguva yekushandisa kudzivirira iyo catheter kudonha kana kutyoka; pamusoro pezvo, svina chubhu uye shandura membrane kamwe pasvondo (nemukoti), uye edza kushandisa shawa kugeza. Iyo yakasununguka membrane inofanirwa kutsiviwa nenguva yekudzivirira iyo catheter kubva kuvharika kana hutachiona hweganda nemidziyo yeropa panzvimbo pakaiswa catheter. Kana PICC yakachengetedzwa zvakanaka, inogona kazhinji kushandiswa kweanopfuura gore rimwe, iro rinokwana kuchengetedza kusvika kumagumo echemotherapy.
1. Kusarudza tsinga
PICC catheters inowanzoiswa mumitsipa inodhura yeiyo cubital fossa, iyo yepakati cubital vein, uye cephalic vein. Iyo catheter inoiswa yakananga kune yepamusoro vena cava. Inoda kusarudza yemidziyo yeropa ine yakanaka kuchinjika uye kuoneka.
2. Zviratidzo zvePICC intubation
(1) Avo vanoda kuiswa mukati kwenguva refu, asi chimiro chetsinga dzepamusoro ndedzehurombo uye hazvisi nyore kuti ubudirire kubaya;
(2) Izvo zvinodikanwa kudzokorora kuisa zvinokurudzira zvinodhaka, senge chemotherapy mishonga;
(3) Yakareba-nguva yekuisa mishonga ine yakakwirira kubvumidzwa kana yakakwira viscosity, senge yakakwira shuga, mafuta emulsion, amino acids, nezvimwe
(5) Kuiswazve kuwedzerwa zvigadzirwa zveropa, seropa rese, plasma, maplatelet, nezvimwe.
(6) Avo vanoda kuwedzerwa kuwedzerwa kweropa mukati.
3. Izvo zvinopesana zvePICC catheterization
(1) Mamiriro emuviri wemurwere haakwanise kutsungirira mashandiro eiyo intubation, senge chipingaidzo cheropa coagulation, uye avo vasina kudzvinyirirwa vanofanirwa kuishandisa nekungwarira;
(2) Avo vanozivikanwa kana vanofungidzirwa kuve vanokanganiswa nezvinhu zviri muchetereta;
(3) Nhoroondo ye radiotherapy panzvimbo yakarongerwa intubation saiti munguva yakapfuura;
(4) Nhoroondo yakapfuura yephlebitis uye venous thrombosis, nhoroondo yekushungurudzika, uye nhoroondo yekuvhiya kwevascular panzvimbo yakarongerwa nzvimbo yekumusoro;
(5) Yemukati matissue zvinhu zvinokanganisa kugadzikana kana patency yecatheter.
4. Nzira yekushandisa
Murwere anotora chinzvimbo chepamusoro uye anoyera kureba kwemurwere kubva panzvimbo yekubaya kuenda kune yepamusoro vena cava ine tepi yekuyera. Kazhinji iri 45 ~ 48cm. Mushure mekusvirwa saiti, iyo yekutenderera inosungirirwa uye inowanzoiswa disinfected. PICC catheter venous puncture inoitwa zvinoenderana nemirairo, uye inochengetwa zvinoenderana nemamiriro emurwere. Kureba kwekateti, X-ray firimu mushure mekupiswa, inogona kushandiswa mushure mekusimbisa kuti iri munzvimbo yepamusoro vena cava.
(1) Nekuti iyo yekurova poindi iri mune yekunze kwepamusoro mutsinga kana PICC yaiswa, hakuzove neanotyisidzira hupenyu senge reropa pneumothorax, hombe yeropa musanganiswa kuputika, hutachiona, mweya embolism, nezvimwe, uye sarudzo yemidziyo yeropa. yakakura, uye ponji yekubudirira mwero wakakwira. Kufamba kwemaoko panzvimbo yekubaya hakurambidzwe.
(2) Inogona kudzikamisa marwadzo anokonzerwa nevarwere nekuda kwekudzokororwa venipuncture, nzira yekuvhiya iri nyore uye yakapusa, uye haina kutenderwa nenguva nenzvimbo, uye inogona kuvhiyiwa zvakananga muwadhi.
(3) Iyo PICC catheter zvinhu zvakagadzirwa neakasarudzika polyurethane, ine yakanaka histocompatibility uye kutevedzera. Iyo catheter yakanyorovera uye haifanire kutyorwa. Inogona kusiiwa mumuviri kwemwedzi mitanhatu kusvika pagore rimwe. Hupenyu hupenyu hwevarwere mushure mekutenderedzwa hausi kunyanya hahuzokanganisike.
(4) Nekuti iyo catheter inogona kupinda mukati mepamusoro vena cava, uko kuyerera kweropa kwakakura, inogona kukurumidza kudzora iyo osmotic kumanikidza kana maronda emuno emukati, necrosis, uye phlebitis inokonzerwa nekemotherapy mishonga.
Varwere vanoenda mukutanga intubation havazombooni kukuvara kwehuturu panguva yekemotherapy, kuve nechokwadi chekuti kune yakanaka venous ndima panguva yekemotherapy uye iyo chemotherapy inogona kupedzwa zvinobudirira. Yakave iri nyore, yakachengeteka, inokurumidza uye inoshanda kupinda mukati mekuvharira kwenguva refu intravenous rutsigiro rwehutano uye mishonga yevanorwara zvakanyanya uye chemotherapy varwere.
Kana iyo PICC pombi yakavharwa nenzira isingazivikanwe, yakaipa nzira yekumanikidza inogona kushandiswa kubaya yakasanganiswa urokinase 5000u / ml, 0.5ml muPICC lumen, gara kwemaminetsi gumi neshanu wobva wabuda nesirinji. Kana iro ropa rikadhonzwa, zvinoreva kuti thrombosis inobudirira. Kana pasina ropa rakaburitswa, oparesheni iri pamusoro inogona kudzokororwa kakawanda kuita kuti urokinase igare mukateti kwenguva yakati rebei kusvikira ropa raburitswa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti huwandu hwakazara hweurokinase haufanirwe kupfuura 15000u. Mushure mekunge catheter isina kuvharwa, bvisa 5ml yeropa kuti uve nechokwadi chekuti mishonga nemachira zvabviswa.
Iko kupfeka kunofanirwa kuchinjwa kwemaawa makumi maviri nemana ekutanga. Mushure mekunge ronda rapora zvakanaka uye pasina hutachiona kana kubuda ropa, chinja kupfeka mazuva ese manomwe. Kana kupfeka kwemaronda kwakasununguka uye kwakanyorova, kuchinje chero nguva. Kana iyo saiti yekubaya ine hutsvuku, mapundu, exudation, allergies uye zvimwe zvisina kujairika mamiriro, iyo nguva yekupfeka inogona kupfupiswa, uye shanduko dzemuno dzinofanirwa kuramba dzichicherechedzwa. Kunyatsoita aseptic mashandiro pese panopfekwa kupfeka. Iyo firimu inofanira kubviswa kubva pasi kusvika kumusoro, uye kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kugadzirisa iyo catheter kudzivirira kuti isadonhe. Nyora zuva racho mushure mekutsiva. Vana pavanogeza, putira nzvimbo yakatsemurwa nepurasitiki, uye nekuchinja kupfeka mushure mekugeza.
Usati washandisa PICC kumisikidzwa, shandisa iodophor cotton swab kupukuta iyo heparin cap kwemasekondi makumi matatu. Usati wapora uye mushure mekubayiwa mushonga, shandisa sirinji isingasvike pa10ml kudhiraina saline yakajairika kuti ubudise lumen. Mushure mekuisirwa zvinwiwa zvepamusoro-soro senge zvigadzirwa zveropa uye mhinduro dzemuviri, kupomba kwepombi ne20ml yeyakajairwa munyu. Kana iyo infusion mwero ichinonoka kana kwenguva yakareba, iyo chubhu inofanirwa kukwizwa neyakajairwa munyu panguva yekushandisa kudzivirira iyo chubhu kubva kuvharidzirwa.
Pashure: Enteral kudyisa rinovira
Zvadaro: Disinfection cap